Septemba 2021 – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Monthly Archives: Septemba 2021
Igwe igwe na -agbagharị agbagharị 3D – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ị hụrụ egwuregwu bọl n'anya! Ọ bụ ọsọ ọsọ site n'ọtụtụ ihe mgbochi na -enweghị atụ na oge na -agwụ! Nyefee, bugharia, wuo, mana adala tụfuo ndụ gị! Ọ bụ egwuregwu siri ike n'ụwa na -adịghị ahụ anya, mana ya na physics na -adịghị agbanwe agbanwe!Ị ga -adị mfe ịmụta… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: BALL, CheatsHack, Rolling, Eluigwe
Gear ikpeazụ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Gear ikpeazụ, egwuregwu RPG ọhụrụ na-egosipụta “Mechs & Ụmụ agbọghọ”, na -abịa n'oge adịghị anya!Gbanwee mechs gị na uche gị, zụọ ọtụtụ ụgbọ elu mara mma nke ọrụ dị iche iche wee nwee ọmarịcha agha mech!Njem na -egosi Mechs dị ike & Pilot mara mma na -achọ ịmalite! Onye isi, ka anyị lụọ ọgụ ọnụ! Atụmatụ egwuregwu:[Tinyegharịa mechs gị na… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, FINAL, Ngwa
Unicorns na Unicycles – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Tụgharịa mpi gị ka ọ bụrụ mma agha n'egwuregwu egwurugwu egwuru egwu a dị ụtọ nke physics na-egosipụta unicorn na-atọ ụtọ.. Lụọ ọgụ megide unicorn ndị ọzọ mara mma n'ọtụtụ ọkwa pụrụ iche mgbe ị na -ahazi igwe kwụ otu ebe gị tụkwasịrị obi. Mụọ mpi gị ma jikere maka ọbara, akụkọ ifo egwurugwu akụkọ ifo! Atụmatụ Egwuregwu:• Njem egwuregwu otu onye site na multiverse ebe enweghị ọkwa abụọ… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Unicorns, Unicycles
Onye na -agbachitere Empire TD: Tower Defense Strategy Game TD Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ị bụ ọkaibe n'egwu egwuregwu? Gaa nke ọma na ụzọ amamihe gị wee lụso ndị mmegide siri ike ọgụ. Duru ndị dike gị siri ike wee chebe oke nke alaeze gị n'ọchịchịrị! Soro ọtụtụ nde ndị egwuregwu banye egwuregwu atụmatụ na ọgụ na -enweghị njedebe gburugburu ụwa iji merie mmeri na ama ama. Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo Fantasy… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Defender, Nchekwa, Alaeze Ukwu, egwuregwu, Atụmatụ, Ụlọ elu
Ụlọ ọrụ Idle Creepy Park Inc. – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Atụla egwu maka nnukwu anụ 😱! Bido azụmahịa dị egwu nke gị! Ị nwere obi ike ịbanye n'ogige ntụrụndụ juputara na nnukwu anụ mmiri na-asọ oyi 🤔?Ụlọ ọrụ Idle Creepy Park Inc. bụ ahụmihe na-atụ egwu ma na-atọ ụtọ maka ndị egwuregwu niile na-adịghị arụ ọrụ🔥! Iji nnukwu anụ na-atụ egwu inyocha ụlọ egwu egwu abụghị n'ezie abụghị ihe egwuregwu maka onye ọ bụla😮. Ị ga-eme… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Creepy, Enweghị ọrụ, Park
Ogbugbu Midsomer: Okwu, Mpụ & Ndị aghụghọ nzuzo&Mbanye anataghị ikike
Jidere iko gị na-ebuli elu ma nyere aka dozie ihe omimi igbu ọchụ n'egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya a na-atọ ụtọ! Mpaghara Midsomer: a mara mma ebe cottages, ugbo, oke ohia na iyi na-eme ka nro nke di jụụ, ndụ dị jụụ na nke udo. Ekwela ka a ghọgbuo gị… Midsomer bụ ebe dị ize ndụ ama ama ibi na ya, na igbu ọchụ gburugburu ọ bụla… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Mpụ, Midsomer, Murders, Mystery, Okwu
Ọsọ ịgba egwu – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Chọrọ ịnụ ụtọ egwu mana ụzọ ochie ahụ na -agwụ ike? Sonyere anyị n'ọsọ ịgba egwu, ihe egwu na -atọ ụtọ egwu ejiji ije egwuregwu! Oge izizi ị nwere ike ịnụ ụtọ ijegharị ụkwụ n'ikiri ụkwụ. Naanị na agbụrụ ịgba egwu! Chịkọta ọtụtụ ikiri ụkwụ dị ka ị nwere ike n'okporo ụzọ awara awara awara iji bụrụ ebe dị elu… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Dancing, Ọsọ
Ndị nwere ọgụgụ isi & Bara nnukwu uru – Dakọtara 3 Ndị aghụghọ egwuregwu&Mbanye anataghị ikike
Ndị ohi ezurula ihe ịchọ mma dị na Obí na enwere naanị otu onye nwere ike iweghachite ha! Soro Jenni Genie na onye ya na ya na -eme njem gaa ụwa ihe omimi, Trix the Fox, ịzọpịa ndị ohi zuuru akụ nke Obí. Gbanwee, egwuregwu, na -etipịakwa ihe bara nnukwu uru, naputa ihe mgbe ochie, na… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, egwuregwu, Bara nnukwu uru, Ndị nwere ọgụgụ isi, Dakọtara
Mkpụrụ obi ọjọọ: Ndị aghụghọ RPG vlanahụ gbara ọchịchịrị&Mbanye anataghị ikike
N'elu 25 nde nbudata n'ụwa niile! Mkpụrụ obi Grim bụ ndụ efu efu MMORPG ga-egwu egwu. Mpaghara Imperial na-enwebu ọganihu, Ụjọ na ọchịchịrị kpuchiri ndị Plaguelands ugbu a. Ndị bi na ya aghọọla mkpụrụ obi na-awagharị awagharị na-adịghị agwụ agwụ. Ebumnuche gị bụ ịlanarị ogologo oge ị nwere ike na ala a dị ize ndụ. Chịkọta akụrụngwa, wuo ebe ewusiri ike, chebe… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Dark, Grim, RPG, Soul, Ịlanahụ
Ugwu Nchara – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Hills of Steel nwere ike bụrụ egwuregwu egwuregwu physics kacha eri ahụ! Ma ọ bụ n'efu! Gbaa ọsọ gafee ugwu nta wee were nchara gwepịa ndị iro gị. Chịkọta ngwongwo n'aka ndị iro gị dara ada ma kwalite ụgbọ ala gị site na nkwalite kachasị mma na ngwa agha pụrụ iche ị nwere ike ịchọta. Mepee new customizable tanks and brawl your… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Hills, Steel